वडाध्यक्षले कुटे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, • Kalanga News
गृह/प्रदेश समाचार/प्रदेश नं. ७/वडाध्यक्षले कुटे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,
वडाध्यक्षले कुटे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,
भोजपुर– भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष किशोर किरातले नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत ध्यान कुमार थापामाथि हातपात गरेका छन् । राईले अधिकृत थापालाई उनकै कार्यकक्षमा गई हातपात गरेका हुन् ।
अधिकृत थापामाथि किरातले बिहिबार दिउँसो १२ बजे उनकै कार्यकक्षमा कुटपिट गरेको बताइएको छ । किरातले अधिकृत थापालाई ‘तैंले सबै योजनाको रकम पेश्कीबापत किन दिँदैनस् । अहिले नै तैले पेश्की रकम विनियोजन गरी दे’ भन्दै कुटपिट गरेका हुन् । किरातले समयावधि अगावै र प्रक्रिया विपरीत ३३ प्रतिशत पेश्की मागेका थिए । प्रक्रिया विपरीत भएको कारण अधिकृत थापाले पेश्की दिन नमिल्ने बताएपछि किरातले उनीमाथि हातपात गरेका हुन् ।
नाम नखुलाउने शर्तमा एकजना प्रत्यक्षदर्शीले भने, “किरातले स्थानीयवासी, नगरप्रमुख विरबल राई, वडा ४, ६, ७ र १२ का वडाध्यक्षहरु क्रमशः किसान राई, सुजन राई, बुद्ध सिंह तामाङ, शंकर कुमार कार्की र वडा ७ का वडा सदस्य बद्रि अधिकारी, नगरपालिका कर्मचारी, विभिन्न योजनाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष त्यसैगरी इन्स्पेक्टर अमरलाल माझी र प्रहरी जवानहरुको अगाडि नै गालीगलौज गर्दै अधिकृत थापालाई कुटपिट गरेका हुन् ।”
प्रहरीले किरातलाई थापाबाट छुटाउन खोज्दा किरात प्रहरीमाथि पनि जाइलागेका थिए । उनले प्रहरीलाई ‘तिमीहरु यहाँबाट बाहिर निस्की । यहाँभित्र तिमीहरुलाई बस्ने अधिकार छैन’ भनी धम्की दिएका थिए । अधिकृत थापामाथि वडाध्यक्ष किरातले गरेको दुव्र्यवहारका कारण नगरपालिकामा कर्मचारीहरु बस्न नसक्ने स्थिति भएको छ । नगरका कर्मचारीहरु आतंकित भएका छन् । कर्मचारी कार्यालयमा बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नगरपालिकाले वार्षिक कार्यतालिका अनुसार गर्नुपर्ने योजना निर्माणका काममा पनि असर परेको छ ।
नगरपालिकाका कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने वडाध्यक्ष किरातमाथि स्थानीयवासीले कारबाहीको माग गरेका छन् । किरात पटक पटक विभिन्न किसिमका अनपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहँदै आएको पनि स्थानीयले बताएका छन् ।
यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाले भने नियोजित तरिकाले आक्रमण गरेको बताएका छन् । राईले नगरमा संचालन हुने योजनाको सजिलो काम गर्ने र अफ्ठ्यारो कामको चाहिँ स्टिमेट चेन्ज गराउन भनी बारम्बार प्रेसर दिइरहने अधिकृत थापाकोे भनाइ छ । घटनापछि थापा काठमाडौँ गएका छन् ।
नगरपालिकामा उक्त घटना घटेपछि शुक्रशार प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेलले स्थलगत भ्रमण गरेकी छन् । उनले नगरपालिकाका अधिकृत थापामाथि कुटपटि गर्ने वडाध्यक्ष किरातमाथि कारबाही गर्ने आश्वासन दिएकी छिन् ।
वडाध्यक्ष किरातलाई भ्रष्टचार गरेको आरोपमा अख्तियारले पनि मुद्दा हालेको छ । उनलाई विद्युत् जडानमा २२ लाख भ्रष्टाचार गरेको भनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
किरातले एक वर्षअगाडि षडानन्द नगरपालिकामा कार्यरत अनुसन्धानका असई योगेन्द्र मण्डलमाथि पनि हातपात गरेका थिए । त्यस्तै किरात खानेपानीको पाइप चोरीमा पनि रंगेहात पक्राउ परेका थिए । किरात तत्कालिन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् ।